နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်TÜVASAŞမှမြင်ကွင်းများ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[12 / 09 / 2019] IETT ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ Hamdi Alper Kolukısa Assigned	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[12 / 09 / 2019] လျှော့စျေး Den တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများမှ istanbulkart အနိုင်ရ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[12 / 09 / 2019] သောကြာနေ့ မှစ. Metro နှင့်ဓါတ်ရထားထဲမှာတနင်္ဂနွေမှ Izmir ဇီးကွက်တောင်တက်စတင်ထဲမှာ	35 Izmir
[12 / 09 / 2019] တူရကီရဲ့ Kardemir အကြီးမားဆုံး Ingot မှိုဘဝမှကယျတငျ	78 Karabük
[12 / 09 / 2019] အစအဦးTÜDEMSAŞန်ထမ်းတစ်ဦးနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနောက်ဆုံးရထားခရီးမှ Farewell ခဲ့ကြသည်	58 Sivas
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 Sakaryaနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်TÜVASAŞမှမြင်ကွင်းများ
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, Marmara ဒေသကြီး, Tüvasas, တူရကီ 0
Gebze မြို့တော်ဝန်Büyükgöz Zinner, (TÜVASAŞ) တူရကီ Wagon Industries, Inc ကိုဒါရိုက်တာပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Ilhan Kocaarslan သူ့ရုံးခန်းထဲမှာဧည့်ခံ။
Gebze မြို့တော်ဝန်Büyükgöz Zinner, (TÜVASAŞ) တူရကီ Wagon Industries, Inc ကိုဒါရိုက်တာပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Ilhan Kocaarslan သူ့ရုံးခန်းထဲမှာဧည့်ခံ။ အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ် Gebze မြို့တော်ဝန် Zinner Büyükgözနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု ဖော်ပြ. , ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသွားအလာဖြေရှင်းချက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဟုသူကဆိုသည်, သူတို့အလုပ်အတွက်အောင်မြင်မှုစေလိုကြောင်း။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပါမောက္ခBüyükgözပုဧညျ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဒေါက်တာ Kocaarslan စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များ ပေး. , မြန်နှုန်းမြင့်ရထားမော်ဒယ်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ့်အမှတ်တရပစ္စည်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အကြီးစားဖြည့်ပံ့ပိုးများ၏ဒေသခံရထားစနစ် Tools များထုတ်လုပ်မှုကနေTÜVASAŞ 01 / 03 / 2019 အခြားအရထားလမ်းယာဉ်များနှင့်ဆက်စပ်သောTÜVASAŞမက်ထရို, လမ်းရထား, အလင်းရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်များ, ဆင်ခြေဖုံးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်မှုမဟာဗျူဟာများစောင့်ကြည့်နေကြသည်။ အဲဒီစီမံကိန်းတွေဟာနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနှင့်အတူပူးတွဲထုတ်လုပ်မှု၏မူဘောင်အတွင်းခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းအတူတကွယခုနှစ် 2001 Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 48 အပိုင်းပိုင်းမက်ထရိုမော်တော်ယာဉ်များအတွက် Siemens AG ကအတူပူးတွဲထုတ်လုပ်မှုဘောင်အတွက် 2007 တောင်ကိုရီးယား Hyundai / Rotem ကုမ္ပဏီထံမှကုမ္ပဏီအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့ Taksim - Yenikapı 84 ယူနစ် (21 set ကို) မက်ထရိုမော်တော်ယာဉ်များအကြားလည်ပတ်ပါလိမ့်မယ် TCDD 75 အပိုင်းပိုင်း (25 သတ်မှတ်) ဖြင့်လျှပ်စစ်ကားရထားအစုံ၏ပူးတွဲထုတ်လုပ်ခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တနည်းကား, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းအားတစ်ဦး ...
တူရကီ-ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Ergun Atalay ထံမှ Apaydin နှင့် Kurt လာရောက်လည်ပတ်သူ 02 / 02 / 2017 TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး: တူရကီ-ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Ergun Atalay ထံမှ Apaydin နှင့် Kurt လာရောက်လည်ပတ်သူ İsa Apaydın နှင့် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က အထွေထွေမန်နေဂျာ Kurt Veys တူရကီ-IS နှင့်ရထားလမ်း-ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Ergun Atalay သွားရောက်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးရှုခင်းများဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်Hüseyin Kaya အစ္စမေးလ်ထဲမှာမီးရထားသတိလစ်မစ္စတာ Cetin ရဲ့အဆင်သင့်, တာကနိုင်ငံတော်မီးရထားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုလက်ထောက်စည်းဝေးကြ၏။ Turk-ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Ergun Atalay ပို. အလုပ်အကိုင်ပေး၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပိုပြီးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်စက်ရုံများ၏အားကောင်း။ အလုပျသမား '' ကိုယ်စားလှယ်များထပ်မံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ထောက်ခံမှုအားငါပေးမည်အဖြစ်ယနေ့ Ergun Atalay အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပါသည်ကပြောသည်ရှိရာအမှတ်မီးရထားကျွန်ုပ်တို့၏မီးရထားထဲကရ ...
TÜVASAŞသွားရောက်လည်ပတ်သူကိုTÜDEMSAŞမှ General Manager Yildiray Koçarsl 15 / 01 / 2013 TÜVASAŞသွားရောက်လည်ပတ်သူကိုTÜDEMSAŞမှ General Manager Yildiray Koçarsl။ TÜVASAŞအုပ်ချုပ်ရေးယူနစ်နှင့်အတူ Sivas (တူရကီမီးရထားစက်များကော်ပိုရေးရှင်း) ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဆိုပါ Yildiray Koçarsl၏, TÜVASAŞ (တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှု။ Co. ,), ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် General Manager ကို Erol Inal ၏ Chairman အတွက် operating TÜDEMSAŞ ကျနော်တို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသွားရောက်ခဲ့သည်။ ပိုကောင်းတဲ့ Get, အောက်တိုဘာလTÜDEMSAŞအထွေထွေမန်နေဂျာထဲတွင် 2012 နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Yildiray Koçarsl, Inal, TÜVASAŞရဲ့ R & D ဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးသမ္မတမှာကျင်းပ Erol ပိုကောင်း get ဆန္ဒဖြတ်သန်းမှ General Manager အဖြစ်ခန့်အပ်နေစဉ်ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကဆိုသည် ဒါ့အပြင်သူကဧည့်သည်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့။ TÜVASAŞအားလုံး ...
ဗလီများနှင့်ကိုရမ်ကျမ်းသင်တန်းများလာရောက်လည်ပတ်TÜVASAŞ 14 / 02 / 2013 ဗလီများနှင့်ကုရ်အာန်TÜVASAŞသင်တန်းTÜVASAŞသွားရောက်လည်ပတ် Adapazari အတွက် operating, တူရကီဗလီနှင့်ကိုရမ်ကျမ်းသင်တန်းများအစည်းအရုံးများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ Recep Kıyakနှင့်ဒါရိုက်တာများဘုတ်အဖွဲ့၏ဧည့်သည်များဖြစ်ကြသည်။ တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Co. , အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာ Erol Inal အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့, တူရကီဗလီနှင့်ကိုရမ်ကျမ်းသင်တန်းများKıyakနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ Recep လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌŞemsettin Trabzon, ဟူစိန်ပွင့်လင်း၏အတွင်းရေးမှူးကျိုးကြောင်းညီညွတ်သည်စည်းကမ်းဘုတ်အဖွဲ့ Salim Tarksev ၏ Chairman, အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိချုပ် Ozcan Canbul နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါသည် Fatih ညုသူတို့ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရ။ TÜVASAŞမှ General Manager Erol Inal, တူရကီဗလီနှင့်ကိုရမ်ကျမ်းသင်တန်းများ ...
AK လူငယ်TÜVASAŞလည်ပတ်ခဲ့ 03 / 04 / 2013 AK TÜVASAŞလူငယ်TÜVASAŞပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ AK ပါတီ Sakarya ပြည်နယ်လူငယ် Wing နိုင်ငံတော်သမ္မတ Mehmet Keçeoğl, ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌသွားရောက်ခဲ့ပြီးအထွေထွေမန်နေဂျာ Erol Inal သွားရောက်ခဲ့သည်။ TÜVASAŞမှ General Manager Erol Inal ၏ Sakarya ပြည်နယ် AK ပါတီလူငယ် Wing နိုင်ငံတော်သမ္မတ Mehmet Keçeoğlသူ့ရုံးခန်းသို့သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်လေ့လာမှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Burucu မှလူငယ် Wing ပြည်နယ်ဒုတိယသမ္မတ Mehmet Salim Keçeoğlu၏ပြည်နယ်သမ္မတ, Abdurrahim အဆိုပါပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်အဗ္ဗဒူလာ Mustafa Kaymul Sinan Likoz ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ကိုကြေးဇူးတငျကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့TÜVASAŞမှ General Manager Erol Inal TÜVASAŞပြည်နယ်လူငယ် Wing ၏မာနကိုTÜVASAŞ ...
တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဘိန်း 13 စက်တင်ဘာလ 19937။ ဒေသ
IETT ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ Hamdi Alper Kolukısa Assigned
သောကြာနေ့ မှစ. Metro နှင့်ဓါတ်ရထားထဲမှာတနင်္ဂနွေမှ Izmir ဇီးကွက်တောင်တက်စတင်ထဲမှာ
Kayseri အိုလံပစ်အချက်များအတွက်မာစတာ Translate ကြ၏စက်ဘီးစီးနင်း
တူရကီရဲ့ Kardemir အကြီးမားဆုံး Ingot မှိုဘဝမှကယျတငျ
အစအဦးTÜDEMSAŞန်ထမ်းတစ်ဦးနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနောက်ဆုံးရထားခရီးမှ Farewell ခဲ့ကြသည်
Eskisehir Continues သစ်ကိုလမ်းရထားလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်အလုပ်
TCDD 1 ။ အဆိုပါဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးMeriçliထံမှ Nayiri အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်ပတ်သူများ
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc မှစည်းကမ်းစူပါဗိုက်စည်းမျဉ်းဥပဒေ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Published
ဒီဇင်ဘာလ 10 ရွှေ့ဆိုင်း Corlu ရထားအဖွစျဆိုးစမ်းသပ်
Bursa Iznik သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစိတ်သက်သာရာရ
rayhab 12.09.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာဖြစ်ပါသည်
ဥရောပတိုက်တွင် Isuzu ကား Novocit ဘဝ2။ Demo ခရီးစဉ်စတင်ပါ
ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလက်ခံခြင်း Ordulular အာရုံစူးစိုက်မှု! .. Boztepe cableway
နယူးအိတ်ကပ်, Izmit ယာဉ်အသွားအလာစိတ်သက်သာရာရလိမ့်မည်
အကြီးစားဖြည့်ပံ့ပိုးများ၏ဒေသခံရထားစနစ် Tools များထုတ်လုပ်မှုကနေTÜVASAŞ
တူရကီ-ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Ergun Atalay ထံမှ Apaydin နှင့် Kurt လာရောက်လည်ပတ်သူ
TÜVASAŞသွားရောက်လည်ပတ်သူကိုTÜDEMSAŞမှ General Manager Yildiray Koçarsl
Kirikkale အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Sezer TÜVASAŞမှမြင်ကွင်းများ
ဆားဘီးယားရဲ့ Nenad Aleksic TÜVASAŞကောင်စစ်ဝန်လည်ပတ်သူများ
TÜVASAŞကနေဥက္ကဋ္ဌ Zeki Toçoğlu 'ဆိုတဲ့အပြန်အလှန်လည်ပတ်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (218) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
ကြေညာလိုက်သည် TCDD 2019 တစ်နှစ်တာတည်းခိုခန်းများနှင့်အဆောင်အခကြေးငွေများ